Lohmann Brown - izinkukhu, okuyizinto ukhetho kangcono itoho epulazini
Ukuze wandise izinkukhu ukukhiqizwa amaqanda, futhi kuya kuba kwaphuthuma ngamunye ngonyaka odlulayo, abalimi lizalele entsha zofuzo iziphambano futhi iyakwazi ukuqhubeka izala. Inkampani Lohmann usebenza ukuthuthukisa Iqanda-inyama-uhlobo yenkukhu. Le nkampani emhlabeni odumile yasungulwa iziphambano eziningana nge ezahlukene umbala izimpaphe neziqhumane. Ethandwa kakhulu kufanele inkukhu zohlobo Lohman Brown.
Lolu hlobo of izinkukhu kahle kakhulu futhi isisindo somzimba, okuvumela ukusetshenziswa kwalo ukudliwa kanye ukukhiqiza amaqanda. Khulisa nokuthuthukisa zohlobo Lohman Brown izikhukhukazi ngokushesha okukhulu. Izinkukhu ube ovuthiwe ngokobulili lapho befinyelela izinsuku 135. isikhathi ukukhula 161 ngosuku, kanti ukusebenza 96-98%. inkukhu Adult ukusinda amasonto 80 ukukhiqizwa olunzulu amaqanda eneminyaka engu kwezinsuku 165 kuya 185.
Umkhiqizo kwaphumela ezinemibala ensundu, ukala 62 kuya ku-64 amagremu futhi has ngezinga eliphezulu izinga. Lay zohlobo Lohman Brown izikhukhukazi amaqanda ambalwa, ekupheleni yaytsenosheniya asebenzayo. Ngemva kwalokho, lezi zinyoni kuhlatshwa inyama, ngoba eminye okuqukethwe kwabo engenangqondo: wachitha isikhathi esiningi kanye nemali.
Izici eziyinhloko leli fomu commercial ayikwazi kabusha nenzalo okuholela, ukukhethwa izici ezinjalo (futhi ngokuvamile bonke) kweqa. Breed izikhukhukazi Lohmann Brown hybrid ewela by eziningana imigqa-lokuqala isizukulwane.
Ngakho-ke, inani labantu inyoni ingabuyiswa kuphela ngokuthenga ifektri abasha noma amaqanda ukuze libekwe ku-incubator. Ukuzalela Lohman Brown izikhukhukazi kwadingeka kwekulu, eside ekunqabeni ukukhiqiza, abalimi kuvuselelwe Ukwakheka yabo ngonyaka. Khona-ke kungenzeka uqukethe isilinganiso esifanele nganoma esiqongweni ukukhiqizwa amaqanda.
Lohmann Brown - izinkukhu, okuyinto, ngaphandle ukusebenza high, ezikhangayo ngenxa mazombezombe zabo, okusinda eliphezulu izilwane ezisencane. Basuke ibekezelelwe kahle ezihlukahlukene izimo zezulu, kuhlanganise Russian. Ukuze umnotfo lomncane ukhetho best: ukukhiqizwa okusezingeni eliphezulu amaqanda, isisindo isilinganiso isidumbu - 1.8 kg, izindleko ezincane okuphakelayo.
ERussia, okungenisiwe zohlobo Lohman Brown izikhukhukazi evela eJalimane. Isici esiphawulekayo izingqimba hybrid wukuthi ngesikhathi day ubudala ungabahlukanisa kusukela kwabesilisa. Izinsikazi kukhona nsundu ngombala, kanye nabesilisa - omhlophe esizoheha yonke endaweni ezizalela abathanda. Izinkukhu ezifanele ukusetshenziswa ku emakhaya ngenxa yobukhulu bawo ezinkulu nesisindo esiphakeme amaqanda. Walala eyodwa hen laying isamba amayunithi 280-300 ngonyaka, enesisindo 62 amagremu. Liveweight inkukhu 1, 7 - 2 amakhilogramu, iqhude ukala amakhilogremu amathathu. Uma kukhona ushintsho ezimweni sibi, izinyoni amaqanda-laying kwehle kakhulu.
izinkukhu owawusanda kuthengwa kudingeka ukubeka sodwa amasonto amabili. Ngalesi sikhathi, ukubukela njengoba Peck okusanhlamvu. Ngemva kwezinsuku eziyisikhombisa ezihlukahlukene Ukudla, izithasiselo yethulwe, izinga setha ngosuku. Endabeni sohudo amanzi esikhundleni irayisi umhluzi. Uma lokhu kungasizi, udinga ukuxhumana wezilwane wakho.
Ukubeka amaqanda akunakwenzeka ngaphandle kokukhanya esanele elangeni.
Indlela ukuvikela strawberry ezinyonini: yezindlela ezingcono kakhulu
Izingilazi esingokoqobo virtual: izibuyekezo zamakhasimende kanye nokubuyekeza
Ikhukhamba Mexican: incazelo, izakhiwo ewusizo
Yini eyingozi ebumnyameni ubumpofu, iqhwa nama-cortical
Indlela bunny igxuma e CS: iseluleko abadlali
Amakilasi ku elalibazungezile eqenjini wokulungiselela. Ukujwayelaniswa nezwe elingaphandle
Yini entendeni kwesokudla itches? imihlola
Lezinyo zidiliza - yini okufanele uyenze? Ukwelashwa kwamazinyo, iseluleko samazinyo